Talada khubarada ee sokor dhimista - BBC Somali
Talada khubarada ee sokor dhimista
Guddi seynisyahano ah ayaa kula taliyay dowladda in kala bar laga dhigo inta hadda lagu taliyay in laga qaato sokorta.
Khubarada nafaqada ayaan ogoleyn in ka badan 5 boqolkiiba koloriga joogtada ah inay ka timaado, ku dhawaad todoba qaado ee sokorta cuntada lagu darsado. Inta badan dadka waxay qaataan ugu yaraan labo laab inta lagu taliyay.
Dowladda UK ayaa sheegtay inay ogolaaneyso soo jeedintan, ayna u adeegsan doonto inay ku sameyso qorshaheeda guud ee cayilka caruurta oo la filayo inuu soo baxo qeybaha dambe ee sanadkan.
Guddiga seyniska ee ka talobixinta nafaqada ee kala taliya England caafimaadka guud iyo hay'adaha kale dowladda, ayaa doonaya inta lagu taliyay in laga qaato sokorta in kala bar la dhimo, si loo yareeyo qatarta cayilka iyo in kor loo qaado caafimaadka ilkaha.
Prof. Ian Macdonlad oo ah guddoomiyaha kooxda shaqeyneysa ayaa sheegay in ay iska cadahay in sokor badan ay dhibaato ku tahay caafimaadka, loona baahan yahay in la dhimo.
Xiriirka cad ee ka dhaxeeya sokorta badan iyo xaaladaha sida cayilka iyo cudurka macaanka, ayaa ah digniin nalaga donayo inaan dib uga fiirsano habka wax cunisteena.
"Waa inaad yareeysaa sokorta, oo kordhisaa birta, markaas ayaan heli doonaa fursado wanaagsan oo aan muddo ku noolaan karno iyo nolol caafimaad leh".
Halka ugu badan ee sokorta laga helo ayaa ah cabitaanka macaan, macmacaanka iyo sokorto aad ku darsato.
Dad badan ayaa ku taliyay in la canshuuro sokorta, iyadoo dhakhaatiirta iyo hogaamiyayaasha ay baaqaasi oo kale ku soo biirayaan.